– ကိုထက် ကောင်လေးတွေက လူပျိုဖော်ဝင်ချိန် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အပြောင်းအလဲများစွာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတွေ ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုက ပုံမှန်ဖြစ်ရဲ့လား၊ ပုံမှန်ထက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးနေသလား စသဖြင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် စိုးရိမ်ပူပန်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာ ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုအဆင့်တွေကို...
– လရိပ်မေ ဈေးဝယ်တာက အမျိုးသားအများစုမကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အမှားအယွင်းမရှိဘဲ အဝတ်အစားတွေကို ဝယ်ဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ – အရင်ဆုံး ရှော့ပင်းမထွက်ခင်မှာ အလွယ်တကူ ဝတ်နိုင်၊ ချွတ်နိုင်တဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကိုဝတ်ပါ။ ဒါမှသာ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ဝတ်စုံကို ဝတ်ကြည့်တဲ့အခါ အဆင်ပြေမှာပါ။...
ဆစ်ဖလစ်ပိုးကုသမှုနဲ့ ပတ်သက်၍ . . .
မေး ။ ကျွန်တော်သည် ပုံမှန်သွေးလှူနေကျ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပုံမှန်သွေးလှူနေရင်းနဲ့ ၉ကြိမ်မြောက်အရောက်မှာ ဆေးရုံကVDRL Comfirm လုပ်ဖို့ အကြံပြုလာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အံ့သြမိပါတယ်။ တွဲဖက်မှာလည်း VDRL မရှိပါ။ ပြတ်သွားတာလည်း တနှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ။ အပျော်အပါးလိုက်စားတဲ့ အလေ့အကျင့်မျိုးလည်း မရှိပါဘဲ သေချာအောင်...
ကင်ဆာကာကွယ်ရေးအတွက် အမျိုးသားတွေသိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေ . . .
မေး. ကင်ဆာကာကွယ်ရေးအတွက် အမျိုးသားတွေ အထူးသိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကို ပြောပြပေးပါ ဆရာ။ Mg Mg (FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များတာက အသည်းကင်ဆာပါ။ အသည်းကင်ဆာက အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးနဲ့ အရက်အလွန်အကျွံသောက်တာတွေကြောင့်...
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အမျိုးသမီးတွေပဲ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ အထင်မှားတစ်ခုရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အမျိုးသားတွေကလည်း အမျိုးသမီးတွေနည်းတူ စိတ်ဓာတ်ကျတတ်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူတတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားတွေ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိရှိနားလည်ထားမှသာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဖြစ်စေ၊...
ကျားအစေ့-အကြောရောင်ခြင်း (Epididymitis and Orchitis)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဆရာရှင့် တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ Testicles ရောင်တာကလေ။ ဘယ် speciality နဲ့ ပြရမလဲရှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါနော်။ မေးတဲ့သူက အမျိုးသမီး၊ ဖြစ်တဲ့သူက ယောကျာ်း ဟုတ်ပါသလား။ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာလည်း မသိပါ။ ဆရာဝန်တဦးကိုပြရင် လိုအပ်ရင် ဆက်လွှဲပါမယ်။ အမျိုးသားပါရှင်။...
လိင်အင်္ဂါသေးပြီး ကျုံ့သွားပါတယ် . . .
မေး ။ ကန်တော့ပါဆရာ . . ကျွန်တော် လိင်အင်္ဂါသေးသွားလို့ပါ။ သေးသွားပြီး မာကျောမှုနည်းတယ်။ အဲ့ဒါကူညီပါလားဗျာ။ ကျွန်တော် လိင်တံက သေးငယ်ပြီး ကျုံ့သွားလို့ တိုတိုလေးပဲရှိတယ်။ ကလေးငယ်သာသာလောက်ပဲ ရှိလို့ပါ။ NLT (Fb) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ...
အမျိုးသားကြွက်သား သန်စွမ်းစေမည့် ထိပ်တန်းအစာများ
၊ ကိုထက် ၊ ကြွက်သားတွေ အားကောင်းအောင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ဖို့ အချိန်ယူရသလို အားထုတ်ရပါတယ်။ ကြွက်သားသန်စွမ်း တင်းရင်းအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်း မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ အစာစားပေးရင် ကြွက်သားတွေ အားကောင်းအောင် အမြန်တည်ဆောက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ – ဥအမျိုးမျိုး ကြွက်သားသန်စွမ်းအောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေသူတွေကို...
အမျိုးသားတို့ သိထားသင့်သည့် သုက်ကောင်အကြောင်း
၊ ကိုထက် ၊ သုက်ကောင်ဆိုတာ ဖားလောင်းပုံစံရှိပြီး ဝ ဒ သမ ဝ၅ မီလီမီတာလောက် ရှည်ပါတယ်။ လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကစပြီး တစ်မိနစ်မှာ ဝှေးစေ့ကနေ သုက်ကောင် အနည်းဆုံးတစ်ထောင်ခန့် ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။သုက်ကောင်တွေဟာ အားကောင်းဖို့ နှစ်လခွဲခန့် အချိန်ယူရပါတယ်။ သုက်ကောင်တွေက အချိန်တစ်စက္ကန့်မှာ...